Samuel Huntington Pass Away | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← Unicode Interviews
Environmental issues and human rights training at Mekong School →
January 5, 2009 · 8:39 am
Samuel Huntington Pass Away
ယဉ်ကျေးမှုများ တိုးတိုက်မိနိုင်ခြင်းကို နိမိတ်ဖတ်ခဲ့သူ ဆင်မြူရယ်ဟန်တင်တန်ကွယ်လွန်
ကမ္ဘာကျော်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခအဖြစ် ၅၈ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးမှုများတိုးတိုက်မိခြင်းစာအုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သူ ဒေါက်တာဆင်မြူရယ် ပေါလ်ဟန်တင်တန် (အသက် ၈၁ နှစ်) သည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကကြေညာသည်။
ဒေါက်တာဆင်မြူရယ်ဟန်တင်တန်မှာ စစ်အေးခေတ်ကာလ ကမ္ဘာကြီးတွင် ဝါဒရေးရာစစ်ပွဲများအရှိန်လျော့ပါး သွားပြီး ယဉ်ကျေးမှုအုပ်စုကြီးများအကြား ပဋိပက္ခတိုးလာမည်ဟူသော အမြင်သစ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ပညာရှင်လောကကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။
နောင်တွင်လည်း၂ဝဝ၁ စက်တင်ဘာ ၁၁ ဖြစ်ရပ်၊ ၂ဝဝ၂ ဘာလီဗုံးပေါက်ကွဲမှု၊ ၂ဝဝ၅ လန်ဒန်မြို့လယ်ကောင် အကြမ်းဖက်မှုများ အပါအဝင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သော ၂ဝဝ၈ နိုဝင်ဘာ မွန်ဘိုင်းဟိုတယ်အကြမ်းဖက်မှုများက ဒေါက်တာဟန်တင်တန်၏ သီအိုရီများ မှန်ကန်ခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြလျက်ရှိသည်။
၎င်းသည် နာမည်ကျော်စာအုပ်ပေါင်း ၁၇ အုပ် ရေးသားခဲ့သည့်အနက် အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သော The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ခဲ့ပြီး မူရင်းသီအိုရီကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် Foreign Affair ဂျာနယ်၌ စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ မူရင်းစိတ်ကူးကို စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေလိုက်သောအခါ နိုင်ငံခြားဘာသာရပ်ပေါင်း ၃၉ ခုသို့ ဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်ကိုဆရာကျော်ဝင်းက မြန်မာဘာသာသို့ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်တွင် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်။
ဟားဗတ်ကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတွင်အမြဲရောက်နေစေသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် စွမ်းဆောင်ကြရာတွင် ပါမောက္ခဟန်တင်တန်၏ အားထုတ်မှုများလည်းပါဝင်သည်ဟု ဟားဗတ်၏ နာရေးကြေညာချက်တွင် နာမည်ကျော် စီးပွားရေးပညာရှင် ဟင်နရီရိုဆော့စကီးက ပြောကြားဂုဏ်ပြုလိုက်သည်။
ပါမောက္ခဟန်တင်တန်ကို ၁၉၂၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုယေးလ်တက္ကသိုလ်မှလည်းကောင်း၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှလည်းကောင်း၊ ပါရဂူဘွဲ့ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။
Source: The Voice Weekly, Vol.4, No.10
0 responses to “Samuel Huntington Pass Away”
ဒီပို့စ်ကျတော့ ဖတ်ရပြီး အရင်ပို့စ်တွေက ဖောင့်တွေ မမြင်ရဘူးဗျ။ Tool ထဲက ဖောင့် Setting ကို သွားပြောင်းဖတ်နေရတယ်ဗျ။
>HTN> This post use Parabaik font. All the rest posts are with myanmar3.
Add all mm unicode fonts.